Naciimaay: W/Q Abdilmalik Musa Coldoon
Tuesday January 30, 2018 - 10:52:30 in Maqaallo by Reporter Burco
Naciimaay , Calanka aad jeceshahay cadaalad waxa ka waayey Qalbidhagax , oo u soo halgamay , kuna waayey qaar ka mida ah ehelkiisa, abaalkiisiina waxa uu noqday in la dafiro muwaadinimadiisa ,
, oo waxa lagu xalaalaystay dhiibistiisa waa itoobiyaan, sidaana loogu gacan-galiyey taliskii uu iyaga ugula colloobay calankaas, iyada oo ay jiraan qaar ka mid ah madaxda sarsare ee ee dawlada fadaraalka soomaaliya wataan dhalashada itoobiya , xilalna halkaas ka soo qabtay.
Naciimaay , midnimada aad jeceshay waxa lagaga hor-tagey maalintii loo soo dhoofiyey Muqdisho nidaamka fedaraaka ah ee u jeedkiisu ahaa kala kala jarjaris , maamulgoboleedadan aad arkaysaana , ma aha wax kale ee waa kuwoo loo carbinayo in ay noqdoon jamhuuriyado gadaal gooni’isu taagooda ku dhawaaqi doona , iminkaba waad u jeedaa in u eegyihiin kuwo iska madax banaan oo aan la talo ahayn dawladda dhexe , faraha hore ayey ku taaganyihiin , waxa ay sugayaan siidhiga afka loogu hayo .
Naciimaay , soomaali wali waa beelo laabta isu graacaya , sida aad is leedahay waxa aad ku sugantahay magaalo u dhaxayso soomaali oo dhan baa laabta laguu garaacayaa , dhagahana lagaa maqashiinayaa : magaalada anagaa leh , magaaladu waa magaaladii reer hebel ee la soco.
Intaana waxa u dheer, waxa wali lagu dhaqmaa nidaamka afar dhibic shan ( 4.5) , oo aan isgana sida uu yahay ee uu muranku ka taaganayahay loogu dhaqmin , badhka dhibicda ka dambeeye inta aan la gaadhin , afarta afkoodu wax ma deeqo , wayna kala badsadaan.
Naciimaay hadii aad midnomo doonayso , midnimadaa aad rabtaa waa tee waa tumo , ma ta Muqdisho iyo Hargeysaa mise waa ta shantii gobol ee soomaalida ahaa ee aynu ognahay hadda sida uu xaalkuudu noqday ? Midnamdu ma mid kaligaa ka go’aysaa mise waa mid umad dhan wax laga waydiinayo ? qof xaq u yeeshay in uu ku baaqo midnimo miyaanu ka kalena xaq u lahayn in uu ku baaqo mid ta ka duwan? Hadii midnimo siyaasadeed la waayo ma diinta islaamka ee aynu haysno ayeynu ka riddoobaynaa ?
Naciimaay , Amisom iyo ajaanib baa ku hareeraysan Muqdisho, iyo magaalooyin kale oo ka mid ah Soomaaliya,xaruumaha dawlada iyaga ayaa ilaaliya , madaxda iyaga ayaa ilaaliya , madaarka Aadan cadde iyagaa muwaadiniinta ku baadha , askarta amisom oo aynu ognahay dhibta ay u gaystaan shacbka ,ka ugu yari waxa mushahar bishii u qaataa ku dhawaad labo kun oo doolar , askariga soomaaliga ahina sadex boqol oo doolar kuma riyoodo in uu helo . wax u dheer ciidan midaysani ma jiro , dawlado shisheeye ayaa qaarkood gacnta ku haya , madaxdii la filayey in ay yihiin gumaysi-diid waxa ay mareen jidkii hore , ninkastaaba sidii uu kursigiisa u ilaashan lahaa buu falawgeed qabanayaa.
Naciimaay , waad soo baxaysaaye in shaa ALLaah , waanan ku baaqayaa in lagu soo daayo ,marka aad soo baxdid,inta aanad magaalo durugsan diyaarad u raacin, Ka bilaw hagaajintaada hareerahaaga , hargaysadaada , habar-lammaanta u haadi nabad . dadkaagu kuma diidana ee waxa ay u arkeen in aad duullaan ku tahay. waxa ay doonyaan in ay iska kaa dhex arkaan maadaama oo aad inantoodii tahay , qofkastaana waa in uu waxtarka ka bilaabaa ehelkiisa ugu dhaw, jaarkiisa , magaaladiisa iyo degaankiisa .
Naciimaay Soomaali, soomaalinimo cid ay ka dhabtahay oo dhib u marayaa way iska yartahay , Soomaali badan qabiilkiisa , danihiisa ayuu ka hormrinayaa soomaalinimada. cid gaar ah oo ay soomaalinimadu gaar tahay ma jirto , cid badsataa iyo cid yaraystaa ma jirto , dhmaanteen soomaali baynu nahay keena harageysa , Muqdisho, Jabuuti , jigjiga iyo gaarisa .
Naciimaay, adiga iyo dhalinyarada dhiggaaga ahi xadhigu xal uma aha , waxa ay tahay in la idinla fadhiisto , oo la idinla hadlo , la dhagysto waxa idinka dhex guuxaya , waxa doonaysaan iyo waxa aad diidantihiin .
Nabadgalyo Naciima .
C/maalik Sh.Muuse Coldoon